दुखद खबर: रहिनन् ट्याक्सि ड्राइभर कर्णराज गिरिकी आमा, अधुरो भो छोरोलाइ भ्वाइस जिताउने सपना ! – Sandesh Press
July 11, 2021 438
द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३ को लाइभ राउण्डमा आफ्नो प्रस्तुती दिइसकेका सर्लाहीका ट्याक्सि ड्राइभर कर्णराज गिरिकी आमाको नि’धन भएको छ । लाइभ राउण्ड मा सबैभन्दा अब्बल प्रस्तुति दिएका कर्णराजले गाँउदा गाँउदै आमाको मृ’त्युको खवर थाहा पाएका थिए ।
लाइभमै प’फमेन्स अफ द डे पाएर खुशि भएका कर्णराजको खुशि धेरै बे’र टिक्न सकेन । उनलाइ यतिबेला मा’तृ सो’क परेको छ ।कर्णराज गिरिकी आमा छोरालाइ द भ्वाइस अफ नेपालको बिजेता देख्न चाहान्थीन् तर त्यो सपना भने अ’धुरै रहेको छ ।
कर्णराजको परिवार संगको कुराकानिमा कर्णराजकी आमाको एउटै सपना छोरालाइ भ्वाइसको विजेता बनेको हेर्न चाहाने थियो । आमाको अन्तीम इच्छा नै छोरालाइ बिजेता देख्न चाहेको कुरा बोलेको अन्तरवार्ता अहिले भाइरल बनिरहेको छ ।आमाको सपना सबै भएर पुरा गर्ने कर्णका दाजुले बताएका छन् ।
कर्णराज २ वर्षको हुदा बुबा गु’माइसकेका थिए ।बुबाको मायाबाट ब’चिंत भएका कर्णले आमाको सपना समेत पुरा गर्न सकेनन् । कर्ण एक सामान्य परिवारमा हु’र्किएर आफ्नै दुःखमा भ्वाइसको यात्रामा पुगेका थिए । करिव १५ बर्ष अघाडि ठुलो सपना बोकेर काठमाडौँ छिरेका कर्ण दिउसो गित गाँउने र राति ट्याक्सि चलाउने गर्थे ।
यतिबेला आमा र आफ्नो सपना पुरा गर्न भ्वाइसको यात्रामा थिए कर्ण ।स’घर्ष गर्दा गर्दै कर्णलाइ आमाले समेत छो’डेपछि उनि ठुलो ब’ज्रपा’तमा छन् । कर्णका दाइले अब कर्णलाइ दर्शकको माया र साथले मात्रै विजेता बनाउने बताएका छन् ।
Prevटिकटकमा लाइभ बसेर गेम खेल्दा महिनामै १५ /२० लाख कमाइ, डलर झा’र्न खोज्दा चि’प्लिए कलाकार…
Nextब्राजिललाई पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि
बाबालाई फोन गरेर भनिन्- ‘म मर्दैछु’, त्यसपछि ६ तला माथिबाट हाम्फालिन् !
छक्का पञ्जा ४’ को ट्रेलरमा आफुलाई नअटापछि यसरी रिस पोखे जितुले, गरे फिल्ममा काम नर्गने घोषणा